Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare oo ka hadlay shirka magaalada Hobyo – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe ka tagay magaalada Muqdisho,iyaga oo kusii jeeda magaalada Hobyo ee gobalka Mudug halkaas uu ka socdo shir ay leeyihiin odayaasha iyo waxgaradka qaar kamid ah dadka dega deegaannada maamul goboleedka Galmudug.
Ujeedka safarka xildhibaannadan ayaa ah sida ay qaarkood sheegeen ka qeybgalka iyo soo xirridda shirka ka socda magaalada Hobyo.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Abshir Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari) oo kamid ah mudenayaasha shalay gaaray Hobyo ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay ka qeybgalka shirka kadibna ay la kulmi doonaan waxgaaradka iyo bulshada reer Galmudug.
“Mahadcelin kadib waxaan halkaan nimid anagoo ah wafdi ka kooban labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wafdigaas oo dhamaantood laga soo doortay deegaanada Galmudug, ujeedka safarkeenu waxa uu ahaa inaan ka qeybgalno shirka nabadda ee mudadan ka socday magaalada Hobyo, shirkaas oo ujeedadiisu ahayd runtii nabadeynta iyo walaaleynta beelaha Galmudug, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aan u nimaano inaan shirkan idin kala qeyb galno, maalmana waan joogi doonaa haddii alle idmo”. ayuu yiri Sanatar Abshir Maxamed Ahmed.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay dhankooda bogaadinayaan dhismaha maamulka Galmudug.
“Runtii waxa aan dhankeyga ka bogaadinayaa dhismaha maamulka Galmudug,waxana aan rajeynayaa in ay dadaalladu noqdaan kuwo lagu guuleysto Galmudugna ay hesho hoggaan sax ah oo ka shaqeeya horumarka deegaanka iyo dadkaba.”